Muvhuro, Kukadzi 15, 2016 Local time: 00:51
Nhau / Pasi Rose
Zimbabwe Yoita Chinono Mukugadzirisa Nyaya dzeKodzero neHuori
Masangano matatu anoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose aburitsa magwaro akasiyana pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe munyaya dzekodzero.
26 Ndira 2016UNDP neEU Dzobatsira Zimbabwe Pakugadzirira SarudzoBiometric inoshandisa mboni yeziso kana runyoro rwemunwe kana kuti finger prints pakuvhota.
11 Ndira 2016Zimbabwe Chevrons Yotatarika Zvichitevera Kukundwa neAfghanistanVatsigiri vekiriketi vari kuvava mushure mekudamburwa kwemaChevrons nechikwata chepasi pasi cheAfghanistan.
08 Ndira 2016Mapisiro eKunze Ovhiringa Zvirimwa, Vanhu neZvipfuyoSangano remuAmerica rinoongorora nyaya dzechikafu re Famine Early Warning Systems Network, Fewsnet, riri kuyambira mugwaro raro rakabuda svondo rino kuti kupisisa kwekunze nekusanaya kwemvura kwatopa kuti zviri kutarisirwa kubuda mugoho remwaka wa 2015 na 2016 zvideredzwe zvakanyanya.
05 Ndira 2016Chobvondoka muChitungwiza Mapurisa Achirwisana neVatyairi veMakombi!Yanga iri bata murefu bata mupfupi muChitungwiza neChipiri apo vatyairi vemakombi vange vachirwisana nemapurisa.